Dhalinyaro u Dhalatay Degaanka Somalida oo Lagu Xidhay Port Elizebath |
Elizebath (NogobNews) 02/10/2011 Saddex dhalinyaro ah, oo u dhalatay degaanka Somalida Ethiopia oo lagu xidhay magaalada Port Elizebath ee dalka Koonfur Afrika maalintii Jamcaha ahayd ee ay bisha Septmber ahayd 23ka..
Xadhiga dhalinyaradan ayay ka dambaysaa kooxda Jwxo-shiil, dhalinyaradu waxay ka mid ahaayeen xubnaha Jaaliyada degaanka Somalida Ethiopia. Wax kale oo dambe ah oo ay leeyihiin oo la sheegay ma jiraan.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa waxay maleegtaa qorshayaal ay dambiyo ugu samaynayso dhalinyarada taageerta nabada ka dhalatay degaanka Somalida Ethiopia, ee ku nool dalka Koonfur Afrika.
Dhalinyarada la xidhay ee ay dacwaysay kooxda Jwxo-shiil, ayey magacyadoodu kala yihiin; 1. Cabdi Xasan Akhtar, 2. Maxamed Cabdi Xiis
3. Cabdiraxmaan Yuusuf Barkadle.
Dalka Koonfur Afrika ayey suurto gal ka tahay in Boolisku ku qabtaan kolka lagu dacweeyo, iyaga oo kugu haynaya saldhig Boolis inta laga baadhayo dambiga laggugu soo dacweeyey.
Ma aha markii ugu horaysay ee ay kooxda Jwxo-shiil, dacwayso muwaadiniin u dhalatay degaanka Somalida Ethiopia. Waxayna mudo xoogaa jirtay dacweeyeen muwaadin kale oo ka xoogsan jiray dalka Koonfur Afrika, kaas oo kolkii dambe ay safaarada Ethiopia soo faragalisay kiiskiisa.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa dilal iyo dacweyn ku haysa dadka u dhashay degaanka Somalida Ethiopia ee neceb colaada.
Arimahan ay hada ka bilaabeen koonfur Afrika ayey hore uga bilaabeen dalka Kenya, kolkii dambana waxay keentay in ay dhibaatadii fido oo laga mamnuuco kooxda Jwxo-shiil dalka Kenya.
Dhalinyarada u dhalatay degaanka Somalida Ethiopia ee ka xoogsata dalalka Afrika ayey haboon tahay in ay iska diiwaan galiyaan safaarada Ethiopia ee ka jirta dalka ay ka xoogsadaan, si dhibaatadooda loola socdo